e taona ny ankamaron’ny olona beazina :Tsy afa-mandray ankizy vaovao ny Les Orchidées blanches | NewsMada
e taona ny ankamaron’ny olona beazina :Tsy afa-mandray ankizy vaovao ny Les Orchidées blanches
Par Taratra sur 08/12/2017
Manana olana amin’ny fitohizan’ny fibeazana ny olona manana fahasembanana ara-tsaina ny akany eny Androhibe. Tsy misy rafitra mandray an-tanana azy ireny rehefa zokiolona.
130 amin’izao fotoana izao ny isan’ny ankizy sy tanora manana fahasembanana ara-tsaina beazina ao amin’ny akany médico- éducatif, Les Orchidées blanches Androhibe. « Ny olana, efa mandroso taona (40 taona no ho mihoatra) ny 20 amin’ireo raisina an-tanana ka mametra-panontaniana amin’ny hoaviny ny tomponandraikitry ny akany », araka ny fanazavan’ny mpiandraikitra ny fanabeazana, Razanajatovo Noa, omaly. Aterin’ny ray aman-dreny mamonjy ny akany na koa mandeha irery miaraka amin’ny fiarabe mpitatitra smpianatra izy ireo isa-maraina ary mbola manaraka ny sahanasa sy ny fibeazana samihafa. 54 taona ny zokiny indrindra ary afaka 10 taona, ho zokiolona avokoa ny ankamaroan’izy ireo. Ho an’ireo tsy afaka mivezivezy mankany amin’ny akany intsony, tonga manatona any an-tokantrano ny mpanabe manohy ny tohana. Noho ny toe-java-misy, tsy afaka mandray ankizy manana fahasembanana vaovao ny akany, ankoatra ny any amin’ny sampana ambany indrindra (centre d’éveil) satria tsy maharaka ny toeram-pandraisana. Amin’ny ankizy sy tanora beazina ao, 25 ireo miasa amin’ny fanamboarana tsaoka sy fanamainana voankazo sy legioma.
Beazina hahay hikarakara vatana
Tanjon’ny fibeazana ny hampahaleo tena ny ankizy, hifehezany ny fikarakarana ny tenany amin’ny andavanandrony. Ho an’ireo efa zokiny amin’ny taona, ampianarina ho afaka mivezivezy irery sy mahavita zavatra izy ireo tsy ho vesatra amin’ny fianakaviany. Misy ihany ireo tafiditra miasa eny amin’ny orinasa mpamokatra savony sy ny UNAHM Behoririka arakaraka ny vesatry ny fahasembanana misy eo aminy, hoy ny fanazavany ihany. 40 ny mpiasa mampihodina ny akany, 11 ireo mpanabe tafiditra ho mpiasam-panjakana. Ampolony koa ny mpiasa “specialist” amin’ny fikarakarana olona manana fahasembanana nivoaka avy amin’ny sekoly manokana. Isan-kerinandro, misy fivoriana teknika hamahana ny olana niseho nandritra ny herinandro lasa hampitovy ny fomba fiasa ho an’ny rehetra.
Nitondra sakafo sy kilalao ny reny mpiahy ny marefo
Ho fanamarihana sahady ny fety ho avy, nanolotra sakafo ho an’ny toeram-pisakafoana ao amin’ny akany Les Orchidées blanches sy kilalao ny vadin’ny filoha, Rajaonarimampianina Voahangy. Nitondra izany teny Androhibe, omaly, ny vadin’ny Praiminisitra, Mahafaly Bernadette sy ny vehivavy vadin’ny minisitra maromaro. Vary, menaka, savony, ronono amin’ny boaty ny fanampiana azo. Amin’ny ankapobeny, 3 500 ny olona hisitraka ny tohana eto Antananarivo eny amin’ny akany fibeazana ny olona sembana sy ny ho an’ny fianakaviana marefo.